Ny Sony Xperia X dia mijaly noho ny hafanana be loatra amin'ny fakan-tsary | Androidsis
Ny telefaona Xperia dia nisy hatrizay voatsikera noho ny hafanana be izay mijaly amin'ny fotoana sasany. Izy io koa dia zavatra iray izay tsy misy finday hafa voavonjy, ao anatin'izany ny sisin'ny Galaxy S7 rehefa milalao lalao dia mafana be ianao, fa andao lazaina fa ny mpamokatra Japoney dia nifandray tamin'ireo olana ireo foana. Azontsika atao ny mahatadidy ny olana nahazo ny Xperia Z3 + tamin'ny fakantsary tamin'ireny fanidiana tsy mahaliana ireny rehefa mampiasa fakan-tsary.
Toa, ao amin'ny Xperia X vaovao, ny telefaona avy amin'ny elanelam-potoana vaovao izay nisolo ny Z, dia manana olana amin'ny hafanana amin'ny fakantsary. Rehefa fantatro ihany izany mirakitra horonantsary amin'ny vahaolana 1080p rehefa manomboka mafana be ity finday ity. Bibikely izay mety ho olana amin'ny fivarotana an'ity terminal ity fa ny faran'ny herinandro izao dia efa ao anaty fampirantiana ireo orinasa ara-barotra eto amintsika.
Io ny YouTuber Damir Franc izay namoaka horonantsary izay nivoahan'ny fakantsary Sony Xperia X avy amin'ny maripana ara-dalàna mankany amin'ny hafanana be mba hamaranana manidy ny fampiharana fakantsary amin'ny 10 minitra. Ny zavatra mahatsikaiky dia na ny fakan-tsarin'ny Galaxy S7 aza dia mety hahatratra 40 degre ny mari-pana, nefa tsy mijaly amin'ny fampisehoana.
Ary koa, i Damir tenany dia nilaza fa rehefa milalao ny Xperia X mandritra ny adiny iray izy dia tsy mihoatra ny 38 degre ny finday avo lenta, izay midika fa mieritreritra fa tsy ny chip Snapdragon 820 no olana ary avy bebe kokoa amin'ny fakantsary, ka ny bibikely angamba no antony hitrangan'izany. Manantena aho fa i Sony dia afaka manamboatra ny bibikely atsy ho atsy ary mampiditra fanavaozana, raha toa ka bug momba ny lozisialy no resahina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Ny fakantsary Xperia X dia mijaly noho ny bibikely izay mahavita manafana be ilay terminal
Oroka ny e (tsipìkako) dia hoy izy:
fa ny sary dia an'ny Xperia XA .. Mmmmmh
Valio i Kiss my e (lbows)
Samsung dia nanambara ny J3 Pro miaraka amin'ny efijery 5 ", Snapdragon 410 ary RAM 2GB